I-China iiglavu ezili-10 eziqhelekileyo zokukhusela kwiinkcukacha kunye nabenzi bazo bokukhusela kunye nabathengisi | Joysun
Iiglavu ezili-10 eziqhelekileyo zokukhusela kwiinkcukacha kunye nokusebenza kwazo kukhuseleko
Isandla siyinxalenye ebaluleke kakhulu yomzimba wethu, kwaye umsebenzi kunye nobomi azinakwahluka kuwo. Ukusukela ngexesha lokuzalwa kwethu, ukuya esiphelweni sobomi, izandla bezisoloko zihamba. Kulusizi ukuba sihlala sikutyeshela ukubaluleka kwayo kunye nokukhuselwa kwezandla zethu, ukuze kushishino lwale mihla, iingozi zokulimala kwezandla zande kakhulu, kwaye ukonzakala kwezandla kubangele ukonzakala kwezandla kwiindidi ezahlukeneyo zeengozi ezinxulumene nomsebenzi ama-20%. Le yidatha eyoyikisayo, ke ukhetho oluchanekileyo kunye nokusetyenziswa kweiglavu zokuzikhusela kubaluleke kakhulu.
Ukwenzakala okuqhelekileyo kwezandla kunokuhlelwa ngokwamanqanaba amathathu, oko kukuthi, ukwenzakala emzimbeni, ukonzakala kweekhemikhali kunye nokwenzakala kwebhayiloji.
Ukulimala komzimba kubangelwa ngumlilo, ukushisa okuphezulu, ukushisa okuphantsi, i-electromagnetic, i-radiation ionizing, ukutshatyalaliswa kombane kunye nezizathu zomatshini. Inempembelelo enkulu kumathambo, izihlunu, izicubu kunye namaziko, ukwaphuka kweminwe kakhulu, ukwaphuka kwamathambo kunye neminwe emhlophe, njl.
Damage Umonakalo wemichiza ngumonakalo kulusu lwezandla olubangelwa yimichiza, ikakhulu ngenxa yokuchaphazeleka kwexesha elide kwiiasidi kunye neealkalis, ezinjengezinto zokucoca, izibulala-ntsholongwane, njl., Kunye nokuchazwa kwezinye izinto ezinetyhefu.
Ukonzakala kwendalo kulula ukuyiqonda, ngokusisiseko sisifo sengingqi esibangelwa kukulunywa kwezinto eziphilayo.
Ungakuphepha njani ukonzakala kwesandla kukusebenzisa iigloves zokhuselo ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo emsebenzini. Ngoku chaza ngokweenkcukacha iiglavu ezili-10 eziqhelekileyo zokukunceda ukhethe iiglavu ezifanelekileyo.
Uhlobo lokuqala: iiglavu zokwambathisa
Iiglavu zigqunyiwe zisetyenziselwa umsebenzi ophilayo. Kwi-voltage ye-AC ye-10 kV okanye ehambelana nezixhobo zombane ze-DC, ukunxiba iiglavu ezifakiweyo kunokwenza umsebenzi wokugquma ngombane. Njengeglavu yokwambathisa, kufuneka ibe neempawu ezifanelekileyo zokugquma, kunye namandla oqinileyo, ubungakanani ngexesha lekhefu, ukuxhathisa ukumelana, ukuguga, ukumelana nobushushu obuphantsi kunye nokumelana nelangatye konke kulungile. Ukubonakala kunye netekhnoloji yeiglavu kufuneka ihlangabezane neemfuno "zeMeko zoBuchwephesha Jikelele zeeGlavu eziKhuselweyo zokuSebenza ngokuSebenzayo", kwaye imveliso engqongqo inokufikelela kubuchule bokukhusela obufunekayo ukunqanda ukufa ngenxa yomothuko wombane ophezulu.
Uhlobo lwesibini: iiglavu ezinqamlezileyo
Sika iiglavu ezinganyangekiyo ezisetyenziswa ikakhulu kumashishini afana nokusetyenzwa kwesinyithi, iifektri zoomatshini, ishishini lokuhamba ngebhayisikile, ishishini leglasi kunye nomzi mveliso weplate yentsimbi ukuthintela izinto ezibukhali ekubetheni okanye ekusikeni izandla. Isetyenziswa ikakhulu ifayibha kunye neminye imveliso eyomeleleyo yamalaphu, okwangoku esetyenziswa kakhulu yinkampani yase-US iDuPont Kevlar. Izinto zeKevlar luhlobo lwearamid fiber. Iiglavu ezisikiweyo ezinganyangekiyo ezenziwe zithambile kuneemveliso zesikhumba, kwaye zinokuchasana okungcono kobushushu, ukumelana nomlilo, ukusika ukuxhathisa kunye nokunxiba ukuxhathisa. Izinto zeKevlar zikwangumbandela oqhelekileyo wesikrweqe somzimba, kwaye ukusebenza kwawo kukhuseleko kuthembekile.
Uhlobo lwesithathu: iiglavu ezinqabileyo zelangatye ezinganyangekiyo
Ubushushu obuphezulu bokukhusela ilangatye iiglavu ezikhuselayo ziiglavu zokuzikhusela ezisetyenziswa kwindawo enobushushu obuphezulu, ezisetyenziswa ngokunyibilikisa izithambisi zangaphambi kwabasebenzi okanye ezinye iintlobo zomlilo. Ineentlobo ezintathu, enye ilangatye liyabuyisa ngelaphu njengelaphu leglavu, kwaye embindini kufakwe i-polyurethane njengobushushu bokugquma; enye yenziwe ngezinto ze-asbestos njengobushushu be-insulation, kwaye ngaphandle yenziwe ngelaphu elidodobadayo njengelaphu; Okokugqibela enye kukutshiza isinyithi phezu kweiglavu zesikhumba, ezinokumelana nobushushu obuphezulu kunye nokudodobala kwelangatye kwaye zinokubonisa ubushushu obukhazimlayo. Iiglavu zedangatye ezinganyangekiyo ezinobushushu obuphezulu ziyafumaneka ngobukhulu obuthathu, ezinkulu, eziphakathi kunye nezincinci, ezahlulwe zohlobo lweminwe emibini kunye nohlobo lweminwe emihlanu.
Okwesine: iigloves ezichasayo
Iiglavu ezi-anti-static zihlala zenziwe ngezinto ezilukiweyo eziqulethe imicu eqhubayo, kwaye zingenziwa nge-fiber ende ye-acrylic braiding. Uhlobo lwesibini lweglavu kufuneka luqhotyoshelwe nge-resin polyurethane kwinxalenye yesundu, okanye nge-resin polyurethane kwincam yomnwe okanye ngengubo ye-polyethylene kumphezulu weglavu. Iiglavu ezenziwe ngemicu eqhubayo zinokukhawuleza zisuse umbane ongashukumiyo oqokelelwe ezandleni. Uhlobo lwesibini lweiglavu kunye ne-polyurethane okanye i-polyethylene enamathela ikakhulu akukho lula ukuvelisa uthuli kunye nombane ongashukumiyo. Iigloves ezichasayo zisetyenziselwa ukuhlolwa kwemveliso, ukuprinta, iimveliso zekhompyuter, ukungasebenzi ngoku, ukuhlangana kwezixhobo ezichanekileyo kunye nomsebenzi wokuhlola wamaziko ophando ahlukeneyo.
Okwesihlanu: Iiglavu zewelda
Iiglavu zeWelder sisixhobo esikhuselayo sokuthintela ubushushu obuphezulu, isinyithi esityhidiweyo okanye iintlantsi ekutshiseni esandleni ngexesha lokudibanisa. Iimfuno zokubonakala kweiglavu zewelda zingqongqo ngokuthe ngqo, umahluko phakathi kwebanga lokuqala kunye neemveliso zebanga lesibini. Imveliso yodidi lokuqala ifuna ukuba umzimba wesikhumba uhambelane nobunzima, ukutyeba, ukuthamba kunye nokunwebeka. Umphezulu wesikhumba ulungile, uyunifomu, uqinile, kwaye uhambelana ngombala, ngaphandle kokuziva kunamafutha; Umzimba wesikhumba awunabuthathaka ngokupheleleyo, umphezulu wesikhumba utyebile, kwaye umbala umnyama kancinci. Ibanga lesibini. Iiglavu zeWelder ubukhulu becala zenziwe ngeenkomo, ihagu tamarin okanye umaleko wesibini, kwaye zahlulwe zangumnwe, uhlobo lweminwe emithathu kunye nohlobo lweminwe emihlanu ngokomahluko wohlobo lomnwe. Ngamanye amaxesha iiglavu ze-Welder zinokusetyenziswa njengeiglavu eziphezulu ezinganyangekiyo kubushushu obuphezulu.
Uhlobo lwesithandathu: iiglavu ezichasayo
Iiglavu ezichasene nokushukuma zisetyenziselwa ukuthintela ukungcangcazela okubangelwa zizifo ezibangelwa kukungcangcazela. Kwezamahlathi, ulwakhiwo, ezemigodi, ezothutho kunye namanye amacandelo okuphatha ngesandla izixhobo ezingcangcazelayo ezinjengeesarha zetyathanga, oomatshini bokugrumba kwaye bathambekele ekushukunyisweni kwesifo emsebenzini - - "isifo seminwe esimhlophe." Ezi glavu zongeza ubukhulu begwebu, i-latex kunye ne-interlayer yomoya kumphezulu wesundu ukufunxa ukungcangcazela. Ukujiya kwesundu kunye neepads zeminwe, kokukhona umthamo wevolthi ungcono, kwaye ngcono isiphumo sokuthambisa, kodwa kulula kuchaphazela ukusebenza.
Okwesixhenxe: iiglavu ezimelana neasidi nealkali
Iiglavu ze-Acid kunye nealkali ezinganyangekiyo zingahlulwa zibe ziiglavu zerabha kunye neealkali ezinganyangekiyo, iiglavu zeplastiki kunye neegloves ezinganyangekiyo zealkali, ilatex acid kunye neigloves ezinganyangekiyo zealkali, iplastiki efakelwe iasidi kunye neigloves ezinganyangekiyo zealkali, njl. Yimveliso ekhuselayo ethintela iasidi kunye nezinto zealkali ekonzakaliseni izandla. Iintsilelo ezinje ngokutshiza iqabaka, ukunyikima, ukuncamathela kunye nomonakalo akuvumelekanga. Umgangatho kufuneka uthobele ngokungqongqo amalungiselelo e "Acid (Alkali) Gloves". Enye iglavu enganyangekiyo eneasidi kufuneka ingangeni emoyeni. Phantsi koxinzelelo oluthile, akukho kuvuza komoya kuvunyelwe. Iiglavu ezingangeni manzi kunye neigloves ezinqanda ukutshintshwa zinokufakwa endaweni ye-asidi kunye neiglavu ezinganyangekiyo zealkali, ezinefuthe elihle.
Eyesibhozo: iiglavu ezinganyangekiyo ngeoyile
Iiglavu ezinganyangekiyo ne-oyile zisetyenziselwa ukukhusela ulusu lweglavu kwizifo ezahlukeneyo zolusu ezibangelwa zizinto ezinamafutha. Ezi glavu zenziwe kakhulu ngerabha ye-nitrile, i-chloroprene okanye i-polyurethane. Abanye abantu abanolwazelelelo kukhuthazo lweoyile kunye nenqatha kufuneka basebenzise iigloves ezinganyangekiyo ngeoyile ukunqanda ukubola kwesikhumba, amabala, ulusu olukrunekileyo, ulusu olomileyo, umbala kunye notshintsho lweenzipho.
Okwesithoba: zicocekile iiglavu
Iiglavu ezingenaluthuli zinokuthintela umbane wabantu ukuba ungonakalisi imveliso ngexesha lenkqubo yokuvelisa, kwaye zenziwe ngerabha yendalo. Inokukhusela imveliso ekungcolisweni kunye nefuthe lentsalela yeminwe, uthuli, ukubila kunye neoyile ngexesha lenkqubo yokuvelisa, kwaye ikhusele ngokufanelekileyo imveliso. Ezona glavu ziqhelekileyo zingenalo uthuli kumagumbi acocekileyo ziiglavu ze-polyvinyl chloride (PVC).
Uhlobo lweshumi: anti-X -ray iiglavu
Iiglavu ezi-anti-X -ray ziziiglavu ezizezabo ezinxitywa ngabasebenzi be-X -ray, kwaye zenziwe ngerabha ekhokelweyo ethambileyo enokufunxa okanye inciphise i-X -rays kwaye ineempawu ezintle zomzimba. Abasebenzi ababandakanyeka kwi-X -rays bayayidinga kuba bahlala befumana i-X -ray radiation kwaye banobungozi ebantwini. I-X -rays inokonakalisa ulwakhiwo lwangaphakathi lweseli kwaye ibangele ubomi obude ubomi kwiimolekyuli zemfuza ekunzima ukuzilungisa, kwaye kulula ukwenza umhlaza. Inefuthe elithile elibulalayo kwi-leukocyte yegazi lomntu, ekhokelela ekunciphiseni kwenani, okukhokelela ekwehleni komzimba womzimba, kwaye kulula ukugula.